Myanmar to hold grand religious function to mark 2600th anniversary Shwedagon Pagoda | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » Myanmar to hold grand religious function to mark 2600th anniversary Shwedagon Pagoda
Posted by Kyaemon on Oct 24, 2011 in Cultures, Events/Fundraise, Myanma News | 8 comments
2600th anniversary Shwedagon
YANGON, Oct. 24 (Xinhua) — Myanmar is making preparation to hold grand religious function to mark the 2600th anniversary of the world’s famous Shwedagon Pagoda in Yangon, the official daily New Light of Myanmar reported Monday.
Newly tiling of prayer halls and shrines for convenience of pilgrims, installing of elevators at museum, repository of Buddhist scriptures and archives of the pagoda, building separate staircase to Buddha’s Life Museum with landscape gardening, modernized display of life of Buddha at the museum are being done, the report said.
ရွာထဲက ဘိုလိုပဲ ရေးပါမယ် ဆိုတဲ့ လူတွေ အခုတော့ မြန်မာလို ရိုက်တတ်နေကြပြီ နေရာ တကာ အားရပါးရ ကွန်မန်းတွေ ပေးပြီး ပြောနေကြပြီ မကြေးမှုံ တယောက် ပဲ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ကျန်နေသေးတယ်။ မကြေးမှုံလည်း မြန်မာလို ရိုက်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပြီး အများနဲ့ စိတ်ဓါတ်ချင်း နီးနီးစပ်စပ် နွေးနွေးထွေးထွေး ဖလှယ်ပြီး ကွန်မန်းတွေ နဲ့ စကားပြောရအောင် စောင့်ကြိုဆိုနေမယ်နော်။
ကျုပ် တစ်ခါ မှ ဘိုလိုပဲ ရေးပါမယ် လို့ မပြောခဲ့ဖူးဘူးနော်
ကျုပ် မပါပါဘူးဗျို့ 
အပေါ်ကပုံသာအကြီးကြီးရရင်ကောင်းမှာ.. Desktop မှာတင်ပလိုက်မယ်..
ဓာတ်ပုံကို တချက်ကလစ် လုပ်ပါ
ဒီပုံကလေး က်ို နောက်တချက်ကလစ် လုပ်ပါ
ဒီပုံ ကြီးကိုိုနောက်တချက်ကလစ်လုပ်ပါ
အကြီး ဆုံးပုံထွက်လာ နိုင်
ကလစ် ကစား ကြည့် ပါ
ုKyaemon အခုလို မြန်မာလို ရေးတာcongratulations ပါ ။ အားပေးပါတယ် ။ တတ်နိုင် သလောက်ပေါ့ ။ Burglish နဲ့ပဲ ရေးတာ မှုတ်လား ။ နည်းနည်း တော့ ပင်ပန်း တယ် ၊ keyboard နဲ့လဲ ရိုက်လို့ အဆင်မပြေ ဘူး ။ ဒီလိုပဲရေးနေရတယ် ၊ဟုတ် ။
အားပေး တာ ကျေးဇူး တင်တယ်၊
ဆွေမျိုးကအကြံပေး တာရယ် “Myittha” က ထောက် ခံတာရယ် ဒါ ကြောင့်မို့ Burglish ကိုသုံးနေ ပါ တယ်၊